अनायासका पानाहरु : 09/18/14
बुद्धिसागर को “कर्णाली ब्लुज” माथीको पाठकिए टिप्पणी :
उपन्यास - कर्णाली ब्लुज
जुन कुनै कृती पढिसकेपछी अगाडिको पेजमा रातो पेनले साइन गर्ने गर्छु म । पढी सकेपछी ठिकै लाग्यो भने एउटा साइन, राम्रो लाग्यो भने दुइ वटा साइन र उत्कृष्ट लाग्यो भने तीन वटा साइन ।
यो उपन्यास हर्षबहादुरको जिवन वरिपरी रहेर लेखिएको छ । उसको बालापन देखी युवावस्थासम्मको समग्र जिन्दगीलाई निकै मसिनो गरी केलाईएको छ । हर्षबहादुर - वृषबहादुर को छोरो । एक्लो छोरो । आमा, बा, दिदी र भाई गरी जम्मा चार जनाको सानो र सुखी परिवार छ उनिहरुको । जहाँ हर्षबहादुरका बा डाक्टर हुनुहुन्छ । उनिहरुको परिवारमा ममता दिदिको ममताले निकै सर्हानिय भूमिका खेलेको छ । उनि पर्वतिकी साथी हुन् र पनि पारिवारिक सदस्य भन्दा कम थिइनन् तर यो आत्मियता रहनुले पनि स्पष्टै थाहा हुन्छ कि उनिहरुको परिवार कती मिलनसार र मायावी छ भनेर । आफ्नो जिन्दगीदेखी थकित छिन ममता । आफ्नै जन्मदाताले गरेको अपहेलनाले उनको कालीलो मस्तिष्कमा नराम्रो प्रभाव परेको छ ।
पैसा पाएको दिन ममता दिदी हाम्रा बालाई रातो रिबन ल्याइदिनु भन्थिन् । बाले चुपचाप ल्याइदिनु हुन्थ्यो । "क्यार्छेउ दिदि, यत्तिका रिबन ?" म सोध्थे ।
"एकदिन यिनैमा झुन्डेर म र्छु " भनेर एकछिन चुप लाग्थिन् ।
यो वाक्यांशबाट नै थाहा हुन्छ कि ममता दिदिको जिवन र ज्युनुसँगको समग्र दृष्टिकोण । आखिर, उनले भने झै नै उनि चाडै नै मर्छिन तर रिबनमा झुन्डिएर हैन ज्वरोले थला पारेर । आमा बाले औषधोपचार नगरेर ।
यहाँनिरको यो प्रसंगले मेरो मुटु हल्लिएको थियो जहाँनिर मगर मामाले भन्नु भो - ममताले खाल्डोमा पुर्ने बेला श्वास फेरेकी थिइन् ।
हर्षबहादुर पढ्नमा लद्दु छ तर चकचक गर्न खुब तेजस्वी छ । पढ्दापढ्दै दिदी पार्वती पोइला जान्छिन । यस घटनाले बा आमाको मनमा पहिरो जान्छ । त्यसपछी हर्षबहादुरको परिवार कालिकोट बसाइ सर्छ । कालिकोटबाटै उसले एस एल सि पास गर्छ र उ काठामाण्डौ पढ्न जान्छ । काठमाण्डौ बाटै +२ पास गर्छ र ब्याचलर दोस्रो वर्षमा पढ्दै छ उ अहिले । यही बेला उसको हातमा एउटा चिट पर्छ । जहाँ लेखिएको हुन्छ -'तुरुन्त कोहलपुर टिचिङ हस्पिटल जाने । ड्याडी बिरामी हुनुहुन्छ । २:३० मा फोन आएको थियो ।' उ तुरुन्त हस्पिटल पुग्छ । बा बिरामी हुनुहुन्छ । बेडमा सुतिरहनु भएको हुन्छ । बा'को पिरले आमा बिरामी झै हुनुहुन्छ । बा लाई सन्चो नहुने थाहा पाएपछी मनको घिट्किसो नातिको मुख हेर्ने रहर पुरा गरिदिन सुर्खेत लईजादै गर्दा बाले बाटोमै अन्तिम हिक्का छोड्नुहुन्छ ।
यही कथावस्तुको वरिपरी घुमेकोछ उपन्यास । जहाँ कर्णाली छेउछाउका बासिन्दाहरुको गरीबिलाई पनि स्पष्ट रुपमा देखाउन खोजिएको छ भने केहि प्रसंगहरुबाट जनयुद्धलाई मिसाएको छ । मटेरादेखी कटासे बजार र कालिकोट सम्ममा भेटिएका चन्द्रे, ममता दिदि, भागिराम, बाटु, मन्दिरे, छोट्कु जस्ता फरक फरक पात्रहरुको भिन्न भिन्न परिवेशले उपन्यासलाई पुर्णता दिन साथ दिएका छन् । आफ्नो परिवारको लागी विशेष गरी बाले गर्नु भएको संघर्षलाई उतार्न खोजिएको यस उपन्यासमा सन्तानको लागी बा आमाले गर्ने त्यागलाई पनि उठाउन खोजिएको छ भने बाटुको कथाले छोरी मन्छेहरु अझै पनि आफ्नो इच्छा , चाहना र रहरलाई आफ्नै पैतालाले कुल्चेर हिड्न बाध्य छन भन्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई दर्शाउन खोजिएको छ । पढिरहदा - प्रसंग जहाँ जहाँ पुग्छ त्यही त्यही आफु पुगेको भान भयो मलाई । पाठकलाई अकर्षित गर्न नसक्ने लेखहरु असफल लेख हुन तर बुद्धिसागर यसमानेमा सफल लेखक सावित भएका छन । उसो त लेखक स्वयम आफु जन्मे हुर्केको ठाउँ मै केन्द्रीत रहेर लेखेको भएर पनि होला स्थान र प्रसंगहरु को अनुकुलता अनुसार पात्रहरुको संयोजन कही कतै झुक्किएको छैन न अलमलिएको नै छ । र सोही अनुरुप पात्रहरुलाई उभ्याउन सक्षम देखिएका छन लेखक । जुन सक्षमता सबै लेखकहरुले सहजताका साथ पार गर्न कठिन पर्छ ।
लेखाइ एकदमै सरल छ । पाठकलाई आकर्षित गर्ने कलामा निपुर्ण देखिन्छन बुद्धिसागर । उसो त सबै पाठकहरुको माग एकै प्रकारको हुँदैन न त लेखकले त्रुटी रहिर बनाउन नै सक्छ आफ्नो लेख तर पनि म चाहान्छु - हरेक उपन्यासहरुको अन्त्य सुखद होस । पढिरहदा जती सन्तुष्ट थिए म त्यती नै असन्तुष्ट यो दु:खद अन्त्यले बनायो मलाई । तसर्थ उपन्यासको अगाडिको पानामा मैले दुइ वटा साइन गरेर राखे ।
Posted by ramkrishna at 2:55 AM No comments:
''ECHOES''नामक अंग्रेजी novel कृति प्रकासित
नेपालको परिपेक्षमा सरसरती हेर्दा अंग्रेजी साहित्य धेरै कमै रुपमा भएपनि चितवनका युवा शशक्त क्रियासिल अंग्रेजी कवि ईश्वर कंडेलले केहि समय आगाडी ''बाया''नामक अंग्रेजी कविताको पुस्तक प्रकासन गरिसकेका छन् भने पछिल्लो समएमा फेरि ''ECHOES''नामक अंग्रेजी novel
कृति प्रकासित गरेर एउटा अंग्रेजी साहित्यमा सफलता थपेका छन् नेपालको लागि यसलाई एउटा गौरवको बिषय मान्न सकिन्छ,आगामी दिनमा अंग्रेजी कवि ईश्वर कंडेलले यसैगरी सफलताका खुड्किलाहरु पारगर्दै आगाडी बढुन
Posted by ramkrishna at 2:07 AM No comments:
कुमार नगरकोटीको पहिलो उपन्यास 'ब्लु बोयज' आउँदै
नेरुदा, म खत्तम भएँ यार कुमार नगरकोटीको पहिलो उपन्यास 'ब्लु बोयज' बुक-हिल पब्लिकेशनले प्रकाशन गर्ने भएको छ। राजधानीमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बुक–हिल पब्लिकेशन र नगरकोटीबीच उपन्यास लेखन र प्रकाशन सम्बन्धी सम्झौता भएको हो।
आफूलाई फिक्सन डिजाइनरको रुपमा चिनाउ“दै आएका नगरकोटीले यो उपन्यास अतियथार्थवादी र प्रयोगात्मक रहेको बताए। 'स्वप्नमय फर्म्याटमा लेखिएको युवाको कथा हो, ब्लु बोयज,' उनले भने– 'युवाका लागि लेख्दालेख्दै यो उपन्यास वयस्क र साहित्यका गम्भीर पाठकका निम्ति समेत उपयोगी छ।'
साहित्यको बजारमा साहित्यिक गुणवत्ता कम भएका कृतिको वर्चस्व रहेको समयमा नगरकोटीको यो उपन्यासले गम्भीर लेखक र पाठकलाई समेत प्रेरणा थप्ने पब्लिकेशनका अध्यक्ष भूपेन्द्र खड्काले बताए। उनले भने,'नगरकोटी कल्पनामा बौद्धिकतालाई प्रयोग गर्ने नेपालकै एकमात्र लेखक हुन्। बुक–हिलले उनको किताब सगर्व प्रकाशन गर्नेछ।'
प्रकाशकले नगरकोटीलाई मन खोलेर लेख्नका निम्ति आकर्षक प्रस्ताव गरिसकेको छ। अध्यक्ष खड्काले भने,'ब्लु बोयजको प्रकाशन, सार्वजनिकीकरण र प्रचार प्रसार अहिलेसम्मकै अभूतपूर्व हुनेछ। कुमार नगरकोटीको लेखकीय उचाइको समानान्तर रहेर पुस्तकको बजारीकरण हुनेछ।'
पुस्तक आगामी चैत्र मसान्तभित्र बजारमा ल्याउने तयारी बुक–हिलको छ। पब्लिकेशनले यसअघि विश्वसाइकल यात्री तथा सगरमाथा आरोही पुष्कर शाहको यात्रा–कथा 'संसारलाई साढे पा“च फन्को' सार्वजनिक गरिसकेको छ।
एकाबिहानैै अस्कर वाइल्ड अलि बढी नै वाइल्ड देखियो।
म चाहिँ केही माइल्ड नै थिए“। ऊ केही चिन्तित एवं आतङि्कत देखिन्थ्यो। डर्मिटरीको सुनसान करिडरमा उसले मलाई च्याप्पै समातेको थियो र भनेको थियो, 'नेरुदा, म खत्तम भएँ यार।'
स्कूलमा साथीहरूमाझ हामी पछिल्लो नामको सम्बोधन गथ्यौर। पुलिस स्कूलको यस्तै फुलिस प्रचलन थियो। जेम्स जोयसलाई केबल जोयस मात्रै भन्नुपर्थ्यो। अल्वेयरलाई कामु मात्रै भनिइनुपर्थ्यो। उसलाई कसैले 'कामुक' भन्यो भने सजायको भागिदार भैहाल्थ्यो। हामीहरूको प्रथम नाम उच्चारण गर्ने कार्यकारी अधिकार त केवल शिक्षक/शिक्षिकासित मात्रै थियो।
मीन–पचासको विदा चाँडै नै सकियो।
म स्कुल फर्कें। अस्कर वाइल्ड फर्केर आएन। स्कुल छोड्यो। डाक्टर जिभागोले अस्करको बारेमा धेरै पछिसम्म पनि मसित कुरा गरिरह्यो। गुस्ताव फ्लवर्टले चार्ल्स डिकेन्सको होमवर्क नगरेकोमा क्लास मनिटरबाट हात धुनुपर्‍यो।
म्याडम बोभारीले क्लासमा भन्नुभयो, 'लौ त बोयज! लेट्स सी। तिमीहरूमध्ये को–को पुतली बन्यौ? को–को झुसिलकीरा नै रह्यौ? दोज हू ह्याभ विकम अ बटरफलाई, प्लिज स्ट्यान्ड अप।'
बाँकी झुसिलकीराहरू आ–आफ्नो डेस्क र कुर्सीमा घिसि्ररहे।
Posted by ramkrishna at 1:51 AM No comments:
होष्टेल इन्चार्जद्वारा दृष्टीविहिन छात्रा बलात्कृत
आफूले भनेको विषय पढ्न नमानेको भन्दै कास्कीमा एक छात्रा बलात्कारको शिकार बनेकी छन्। कास्कीको लेखनाथमा रहेको एकिकृत दृष्टीविहिन छात्राबासमा बस्ने छात्रालाई छात्राबास कै इन्चार्जले बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। छात्राबासँका इन्चार्ज दण्डपाणी ढकालले कोहि नभएको मौका पारी बलात्कार गरेका हुन्। ४७ वर्षिय ढकालले ति १८ वर्षिय छात्रालाई छात्राबासको अथिति कक्षमा बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख रहेको कास्कीका प्रहरी प्रमुख बसन्त लामाले जानकारी दिए।
ढकालले नेपाली विषय पढ्न भने पनि नमानेर अंग्रेेजी विषय पढेपछि मैले भनेको नमान्ने भन्दै बलत्कार गरेको ति छात्राको उजुरीमा उल्लेख छ। जनप्रकाश उच्चमावि भण्डारढिकमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत छात्रा एक महिना पहिले मात्रै होस्टेलमा आएकी थिइन्। ढकाल होस्टलेका इन्चार्ज, शिक्षक र आफू पनि दृष्टीविहिन हन्। छात्रालाई भदौ १९ गते ढकालले बलात्कार गरेका थिए। उजुरीमा छात्राले भदौ १९ गते क्याम्पसबाट साढे तीन बजेतिर होस्टेलमा आई पढ्नका लागि बाहिर निस्किने क्रममा ढकालले जर्वजस्ती अतिथि कक्षमा लगेको उल्लेख छ।
छात्रालाई ढकालले गाला मुसार्ने, सम्बेदनशिल अङ्ग चलाएको र मुख थनेर बलत्कार गरेको छात्रको उजुरीमा उल्लेख छ। बलत्कार पछि पनि अन्य दिन एक्लै भेट्ने वित्तिकै सम्बेदनशिल अङ्ग चलाउने गरेपछि छात्रालाई मानसीक तनाव भएको थियो।
तनाव खेप्न नसकेपछि उनले १० दिन पछि होस्टेलमा बस्ने दिदिलाई भनेकी थिइन्। त्यसपछि मात्रै भदौ ३१ गते प्रहरीमा छात्राले उजुरी दिएकी हुन्। उजुरी पछि प्रहरीले ढकाललाई मंगलबार नै पक्राउ गरेको छ। उनलाई ५ देखि ७ वर्ष कैद हुन सक्ने प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
सागर राज तिमिल्सिना पोखरा, असोज २
प्रकाशित मिति: बिहीबार, आश्विन २, २०७१ ०८:२१:४१
Posted by ramkrishna at 1:46 AM No comments:
बुद्धिसागर को “कर्णाली ब्लुज” माथीको पाठकिए टिप्पण...
होष्टेल इन्चार्जद्वारा दृष्टीविहिन छात्रा बलात्कृत...